नेकपामा फेरि भुइँचालो ! « Ok Janata Newsportal
नेकपामा फेरि भुइँचालो !
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अहिले दुई पक्षमा विभाजित छ । वैधानिक रुपमा विभाजित नभएपनि व्यवहारिक रुपमा विभाजनको शिकार भइसकेको छ ।
७१ वर्षे लामो विरासतलाई कम्युनिष्ट पार्टीले जगेर्ना गर्न नसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा सरकार सञ्चालन गर्न खोजेको भन्दै दाहाल–नेपाल पक्ष रुष्ट बन्दै गएपछि र ओलीले बाचा बिर्सदै गएपछि नेकपा फुटको संहारमा पुगेको हो ।
अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको छ । जनताका समस्या मुखरित हुने संसद बन्दी भएको छ । यसले पञ्चायतको झल्को दिएको विश्लेषण हुन थालेका छन् । बैशाखमा मध्यावधि निर्वाचन तोकिएको छ । ओली पक्षले जसरी पनि निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गर्न ताकेता गरिरहेको छ ।
यता, दाहाल–नेपाल पक्षले नेकपाको विवाद नसुल्झेसम्म निर्वाचन हुनै नसक्ने अडान लिएको छ । आइतबार मात्रै आयोगले नेकपाका दुवै पक्षलाई बोलाएर आचारसंहिता सम्बन्धि छलफल गरेको थियो ।
निर्वाचनले आचारसंहिताको मस्यौदा यसअघि नै तयार पारिसकेको छ । नेकपा (दाहाल–नेपाल पक्ष)ले नमान्दा केही सकस थपिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई सदर नगर्ने दाहाल–नेपाल पक्षको दाबी छ । अन्तिम फैसला सर्वोच्चको हातमा भएकोले पुनः संसद सुचारु भएर जनताका समस्यामा जनप्रतिनिधि उत्तरदायी बन्ने विभिन्न विश्लेषणले बताउँछ ।
प्रतिनिधि सभा विघटन ‘बुढी मरी भन्दा पनि काल पल्क्यो’ भन्ने रहेको धेरैको बुझाइ छ ।